Dead By Daylight dia misy amin'ny endrika beta amin'ny Android | Androidsis
Vao herinandro mahery izay Dead By Deadlight dia nambara fa hanana lalao finday manokana, izay havoaka amin'ny Android sy iOS. Lalao izay efa ofisialy izao, noho ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy ny beta-ny. Ny lalao mampihoron-koditra dia efa natomboka tamin'ny andiana tsena manokana, izay mamela ny fidirana amin'izany sahady.
Ireo mpampiasa any Suède, Danemark, Failandy ary Norvezy dia azo sintonina Dead By Daylight dia beta ofisialy izao. Ny studio tompon'andraikitra amin'ny lalao dia manamarina izany ao amin'ny tranonkalany. Midika izany fa afaka mankafy ny lalao mialoha be kokoa noho ny nandrasana tamin'ny ankamaroan'ny isika.
Ankoatra izany, Ity Dead By Daylight beta ity dia tsy voafetra ara-jeografika. Izay ahafahan'ny mpampiasa any amin'ny firenena hafa misintona ny lalao mora foana. Afaka manova ny firenena misy azy ireo ao amin'ny Play Store izy ireo na mahazo miditra amin'ny fisie APK amin'ny pejy maro, izay efa nakarina.
Ny lalao dia iray amin'ireo lohateny mampatahotra indrindra, izay farany manao ny fidirana amin'ny smartphone. Lalao multiplayer izy io, ka olona efatra no tsy maintsy miray hery handosirana olona fahadimy. Ity olona fahadimy ity dia maneho mpamono olona tsy misy indrafo, izay mety ho biby goavambe na olombelona.
Ankoatra izany, isaky ny lalao Dead By Daylight dia miova ny sari-tany. Noho izany dia manasarotra kokoa ny fandosirana, fa mampiala voly foana amin'ny fotoana rehetra. Satria tsy maintsy manana ny fahaizantsika tsirairay amin'izy ireo isika mba hisorohana ny mpamono olona tsy hamono antsika.
Afaka alaina amin'ny fomba ofisialy izao ny beta. Ka raha te hanandrana ny Dead By Daylight ianao dia azo atao izao. Azonao atao ny misintona APK amin'ny tranokala toy ny APK Mirror na UptoDown, izay efa misy. Amin'izany no hahafahanao mankafy ity lalao mampihoron-koditra ity, izay azo antoka fa fahombiazana amin'ny Android sy iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Dead by Deadlight beta dia azo alaina amin'ny Android izao
Efa ho antsasaky ny tapitrisa euro no nangalarina tamin'ity fampiharana fandoavam-bola tsy azo antoka ity